အသက် ၃၀ - ပိုထူသောဆံပင်များ၊ သန်စွမ်းသောလက်သည်းများ၊ ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးသွားခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းနည်းပါးသောအိပ်စက်ခြင်း၊
အသက်အရွယ် 30 -Thicker ဆံပင်, ပိုမိုအားကောင်းလက်သည်း, ဦးနှောက်မြူသွားပြီ, နည်းအိပ်ပျော်ခြင်းကိုပိုနိုးပြတ်သား, အားကောင်း, ပိုမိုပုလ်
ဒါကငါ့ရဲ့ ၂၀ ရက် ၃၀ ပါတ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာကျွန်တော်ဟာအမြောက်အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအတွေးများကိုပျံသန်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, relapse နေရာတစ်လျှောက်လုံးရေးသားခဲ့သည်။ အခြားသူများကပြောနေတာသူတို့အနားမဖြတ်ဘူးလို့ပြောရင်
အဘယ်သို့ငါဒီ Streak စီမံခန့်ခွဲ?
ငါပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတဲ့အခါငါစိတ်ထဲတွေးမိတဲ့အခါငါချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးအခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်တော့တယ်။ ငါ့အတွေးတွေကငါ့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မပြုဘူး လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကငါ ၁ ပတ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမယုံဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာမင်းကိုတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အနည်းငယ်အမည်ကိုမှနောက်ပြန်ဆုတ်, ထူဆံပင်, ပိုမိုအားကောင်းလက်သည်း, ဦးနှောက်မြူသွားပြီ, နည်းအိပ်ပျော်ခြင်းကိုပိုနိုး, အစဉ်အဆက်တို့ထက်ထက်ခြင်း, ပိုမိုအားကောင်းပိုမိုပုလ်ကြည့်, ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစကားသံ Balding 😀
LINK - ရုန်းကန် မှစ. 30 ရက်။ ငါတတ်နိုင်လျှင်သင်နိုင်!